reviews – OOTDMYANMAR
‘THRIFT FLIPPING’: A WAY TO UPGRADE OUTFIT WITHOUT SPENDING
No Comments on ‘THRIFT FLIPPING’: A WAY TO UPGRADE OUTFIT WITHOUT SPENDING
အပ်ရယ်၊ အပ်ချည်ရယ် စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့ရယ်ပဲ လိုပါတယ်။
Altering clothes on your own to make the fit better or createacompletely different piece of clothing is called thrift flip.
ကိုယ့်မှာရှိပြီးသား အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ရအဆင်ပြေသွားအောင် ဒါမှမဟုတ် ပုံစံအသစ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားအောင် ဖန်တီးခြင်းကို Thrift flip လုပ်ခြင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။
Sincealot of people don’t ownasewing machine or know how to use it. We have attachedavideo to inspire you to do it by hand:
အိမ်မှာ အပ်ချုပ်စက်မရှိတဲ့လူတွေ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိသူတွေအတွက် ဗီဒီယို လေးတင်ပေးထားပါတယ်။ ဒါလေးကြည့်ပြီး လိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။
Remember it takes patience and practice.
စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့နဲ့ လေ့ကျင့်မှုများများလိုတာကိုတော့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
HOW TO CELEBRATE MOTHER’S DAY THIS QUARANTINE PERIOD
No Comments on HOW TO CELEBRATE MOTHER’S DAY THIS QUARANTINE PERIOD
Quarantine ကာလ မှာ အမေများနေ့ကို ဘယ်လိုကျင်းပကြမလဲ
Mother’s Day is an annual reminder to give importance with your genuine relationship with your mom. It’s on May 10 this year, and yes, that’s this Sunday. And while quarantine and COVID-19 will definitely make the occasion feel different this year, it is still possible to make your mom smile.
အမေများနေ့ ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့မိခင်နဲ့ စစ်မှန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ မေလ ၁၀ ရက်နေ့ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ဟာ အမေများနေ့အဖြစ် ရောက်ရှိလာပါပြီ။ Quarantine ကာလဖြစ်ပြီး COVID-19 ကြောင့် ဒီနှစ်အမေများနေ့က အခြားနှစ်တွေနဲ့မတူပေမယ့် ချစ်ရတဲ့ မေမေ ကို ပြုံးပျော်စေဖို့ နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။
And if you’re still looking for the best Mother’s Day present/surprise, fret no more. Many of these are tried and tested, and most of all, mom-approved.
ချစ်မေမေ ကို အံအားသင့်စေဖို့ ဘာလက်ဆောင်ပေးရမလဲလို့စဉ်းစားရင်း ခေါင်းရှုပ်မနေပါနဲ့တော့။ အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းတွေက မေမေတွေဆီက ထောက်ခံချက်အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေပါ။
1. Serve her breakfast in bed. (မေမေ အိပ်ယာနိုးလာတာနဲ့ နံနက်စာအသင့်စားလို့ရအောင် အိပ်ယာထဲကို နံနက်စာ အသင့်ပို့ပေးလိုက်ပါ။ )
2.Watchamother-daughter movie together. (မေမေ နဲ့ သမီး ရဲ့ ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ အတူကြည့်ပါ။ )
3.Hostavirtual happy hour. (ဆိုရှယ်မီဒီယာကတစ်ဆင့် ပျော်စရာအချိန်လေးတွေဖန်တီးပါ)
If you’re 18 and above and can’t be with your mom raiseaglass — the virtual way. You can use Facebook messenger, Zoom or any video conferencing app of your choice. Wine or cocktail of your choice!
၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးလို့ မိဘနဲ့ခွဲနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီကာလမှ ချစ်မေမေနဲ့ အတူမရှိနိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အမေများနေ့ကို အတူတူကုန်ဆုံးခွင့်မရဘူးဆိုရင်… ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုပါ။ facebook messenger ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Zoom ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား video call ခေါ်လို့ရတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် application ကို အသုံးပြုပြီး နှစ်သက်ရာ Wine ဒါမှမဟုတ် Cocktail လေး တစ်ခွက်ကို မေမေနဲ့အတူတူ သောက်ကြည့်ပါ။
4. Give heramanicure. (မေမေ့ကို လက်သည်းအလှပုံဖော်ပေးပါ)
5. Picnic in your backyard. (ခြံထဲမှာ မေမေ နဲ့ ပျော်ပွဲစားထွက်ပါ )
6. CookaBurmese dish together. (မေမေ နဲ့ ဟင်းအတူချက်ကြည့်ပါ)
7. Surprise her withadress. (လှပတဲ့ဝတ်စုံတစ်စုံကိုလက်ဆောင်ပေးရင်း surprise လုပ်ကြည့်ပါ)
Photo credits @pinterest & @khinethitlwin
Yes, you can’t go out but we haveasolution for you. You can shop in MDS Myanmar online.
အပြင်ထွက်လို့မရပေမယ့် ဒါကိုဖြေရှင်းပေးမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိတယ်နော်။ MDS Myanmar ကို online က နေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
They also havea“Mother’s Day Promotion” from 6th of May -10th of May. To make this celebration better they will be giving extra 5% off if you postaphoto wearing MDS Myanmar dress with your mother or children. Make sure to tag them .
MDS ရဲ့ “Mother’s Day Promotion” ကို မေလ ၆ ရက်နေ့ကနေ မေလ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမှာပါ။ MDS က ဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ပြီး မေမေ နဲ့ ဒါမှမဟုတ် သားသားမီးမီးလေးတို့နဲ့ အတူရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကို တင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အမေများနေ့မှာ ပိုကောင်းတဲ့အမှတ်တရလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ 5% discount ပေးသွားမှာပါ။
PS Don’t forget to tag us too we would love to share it!
PS မေမေနဲ့သားသားမီးမီးတို့ ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံလေးတွေကို Share ပေးဖို့အတွက် ပုံတင်ရင် OOTDMYANMAR ကို tag ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။
Tags mdsmyanmar, ootdmyanmar, review, reviews